भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अस्ताए सम्बुर गुरूङ, मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला ! – Khabar Patrika Np
भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अस्ताए सम्बुर गुरूङ, मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला !
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १५, २०७८ समय: ०:५८:५३
सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अस्ताए सम्बुर गुरूङ, मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला ! गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका नेपालीहरुले ।
भारतको सिमा रक्षा गर्दा अहिले सम्म थुप्रैको ज्या’न गएको छ भारतले सिमा विवाद भएका स्थानमा गोर्खा सैनिकलाई पठाउने गरेको छ । *** थप भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस***